လေ့လာစရာ – santhit.com
admin August 6, 2017 August 6, 2017 ဟာသ, လေ့လာစရာ No Comments
[Zawgyi] ဆီးအောင့်ထားခြင်းက သင့်ရဲ. ခန္တာကိုယ်ကို ဘာတွေဖြစ်စေသလဲ ? သိထားကြမှာပါ။တကယ်တော့ဆီးမသွားရင် တကယ်ကို များပြားလှတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကို တက်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်တွေက နေပြီးတော့ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ အရေးကိစ္စကြုံလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊မအားလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆီးအောင့်ထားရတာမျိုးကိုကြုံရတက်ပါတယ်။ဆီးမသွားရင်ဘာတွေဖြစ်တက် သလည်းဆိုတာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အကြမ်းဖျဉ်းအနေနဲ့တော့သိထားကြမှာပါ။တကယ်တော့ဆီးမသွားရင် တကယ်ကို များပြားလှတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုတက်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်တွေက နေပြီးတော့ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ ဆီးအိမ်ကို တင်းမာစေတယ် ဆီးအိမ်ကို တင်းမာစေတယ် သာမာန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဆီးအိမ်ဟာ အရည်၁၅အောင်စလောက်ကိုသာထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်နေ့ကို ရေ၆၄အောင်စလောက်သောက်ပါတယ်။ ဒီလိုသောက်လိုက် ခြင်းကြောင့် တစ်နေ့ကိုဆီး၁၀ကြိမ်လောက်သွားရမှဖြစ်ပြီးတော့…
admin August 6, 2017 August 6, 2017 Knowledge, လေ့လာစရာ No Comments
မင်္ဂလာ ပွဲဓာတ်ပုံဆရာမကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အသရေဖျက်ခ
[Zawgyi] မင်္ဂလာ ပွဲဓာတ်ပုံဆရာမကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အသရေဖျက်ခဲ့သည်စုံတွဲဒေါ်လာ ၁ သန်း ဒဏ်ငွေချမှတ်ခံရ အမေရိကန်နိုင်ငံ တက်ဆက်စ်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ပိုင်းရှိ ဒါးလက်စ်မြို့(Dallas)တွင် နေထိုင်တဲ့ဇနီးမောင်နှံ ၂ဦးဟာ သူတို့ ရဲ့ မင်္ဂလာ ပွဲဓာတ်ပုံဆရာမရဲ့ ၁၂၅ ဒေါ်လာတန်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသရေဖျက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁သန်းပေးဆောင်ရန် အမိန့်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာမ အန်ဒရီယာ ပိုလစ်တို (Andrea Polito)ဟာ အန်ဒရူး (Andrew)နဲ့ နီးလ်မော်ဒိုဗန် (Neely Moldovan)တို့ ဇနီးမောင်နှံ ၂ ဦးအတွက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပေးခဲ့တာ…
admin August 5, 2017 News, ဥပဒေ။, လေ့လာစရာ No Comments
ရဲများက အိမ်တွင် ဝင်ရောက် ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်း ပြုလုပ်ပါက အိမ်ရှင်များ သိသင့်သည့် အချက်များ
[Zawgyi] ရဲများက အိမ်တွင် ဝင်ရောက် ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်း ပြုလုပ်ပါက အိမ်ရှင်များ သိသင့်သည့် အချက်များ =================================================== လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ ရဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖော်ပြလျက်ရှိရာ ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ရဲများက အိမ်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်း ပြုလုပ်ပါက မည်သို့ တုံ့ပြန်ရမည်ကို ဖော်ပြလိုပါတယ်။ အိမ်ထဲမဝင်မီ ရဲအနေနဲ့ သူ့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း အထောက်အထားနဲ့အတူ ဦးစွာ ရှင်းပြဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အိမ်ရှင်အနေနဲ့ ရဲကို တံခါးမဖွင့်ပေးမီ ရှာဖွေဝရမ်း ပါ၊ မပါ မေးရပါမယ်။ မပါလျှင် ရဲအရေးပိုင်တဲ့ အမှု…
admin August 5, 2017 ဥပဒေ။ No Comments
ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ သည်းကြီးမည်းကြီး ဆော့ရာကနေ Cam Girl ဖြစ်လာပြီး တစ်နှစ်ကို ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ တစ်သိန်းရှစ်သောင်းကျော် ရရှိနေတဲ့ ကောင်မလေး
[Zawgyi] ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ သည်းကြီးမည်းကြီး ဆော့ရာကနေ Cam Girl ဖြစ်လာပြီး တစ်နှစ်ကို ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ တစ်သိန်းရှစ်သောင်းကျော် ရရှိနေတဲ့ ကောင်မလေး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဘဝဇာတ်ကြောင်းပါ သူမက ဟိုးတုန်းကတော့ ယောကျာင်္းစိတ်ပေါက်နေသူ tomboy တစ်ယောက်လို နေထိုင်ခဲ့ပြီး သူမရဲ. အချိန်တော်တော်များများကို ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ ကစားပြီး ကုန်ဆုံးခဲ့ရာကနေ ယနေ့မှာတော့ သူမဟာ ကင်မရာရှေ.မှာ သရုပ်ပြတဲ့ cam girl တစ်ယောက် ဖြစ်လာပြီး တစ်နှစ်ကို ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ တစ်သိန်း ရှစ်သောင်းလောက် ရရှိနေသူလေးပါ။…
admin August 3, 2017 စိတ်ဓါတ် ခွန်အား, လေ့လာစရာ No Comments
၇၂ နှစ် ဘွားဘွား အဆိပ်ပြင်း မြွေ ၁၁ ကောင်ကို
၇၂ နှစ် ဘွားဘွား အဆိပ်ပြင်း မြွေ ၁၁ ကောင်ကို ရိုက်သတ် ___________________________________ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အိုကလာဟိုးမားပြည်နယ်သူ ဘွားဘွားတစ်ဦးဟာ သူ့အိမ်အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ အဆိပ်ပြင်း မြွေ ၁၁ ကောင် ကို တစ်ကိုယ်တော် ရိုက်သတ်လိုက်ပါသတဲ့။ ထို သတင်း ဟာ လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာ ပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတော့ ဝိုင်းဝန်း ချီးကျူးမှုတွေ ရရှိနေပါတယ်။ ဆူဆန်သွန်ဆင်ဆိုတဲ့ အိမ်နီးချင်း ရဲ့အဆိုအရ ဘွားဘွား မစ္စစ်နျူဘီဟာ သေနတ်၊ ဂေါ်ပြား၊ ထွန်ခြစ် စတာတွေကို…
admin August 3, 2017 News, ရက်ရက်စက်စက်, လေ့လာစရာ No Comments
မွေးဖွားသည့်လ ရာသီအလိုက် ဒေါသကြီးပုံ
[Zawgyi] မွေးဖွားသည့်လ ရာသီအလိုက် ဒေါသကြီးပုံ Aries March 21- April 20 ဒီကာလအတွင်း မွေးဖွားတဲ့သူတွေက စည်းကမ်းမရှိတဲ့၊ လေးစားချင်စရာမကောင်းတဲ့အပြုအမှုလောက် မုန်းတာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတပါးက စိန်ခေါ်တယ်ဆိုရင် ဒေါသထောင်းခနဲ ထလာတတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်။ ဒေါသကို ချက်ချင်းထိန်းချုပ်ပေးမယ့်အရာ သို့မဟုတ် အခြားလူဘေးနားမှာ မရှိဘူးဆိုရင် ရက်စက်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သေချာတာတစ်ခုကတော့ Aries မှာမွေးတဲ့သူတွေကို စိတ်ငြိမ်သွားအောင် ပြန်လုပ်ပေးဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီရက်တွင်းမှာ မွေးတဲ့လူတွေဟာ သူတစ်ပါးကို လွယ်လွယ်ကူကူခွင့်လွှတ်ပေးတတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Taurus April 21-…
admin August 2, 2017 ဗေဒင် ကဏ္ဍ, လေ့လာစရာ No Comments
ကင်းထောက် အဖွဲ့ အကြောင်း
[Zawgyi] ကင်းထောက် အဖွဲ့ အကြောင်း ယူနီဖောင်းဝတ်စုံဆင်မြန်းသည့် ကင်းထောက်များ လိုက်နာ ကျင့်သုံးရသောစည်းကမ်းများကား ကျပ်တည်းလှ၏။ သို့သော် လူအပေါင်း၏အကျိုးကို သည်ပိုးရန် ဝံပုလွေငယ်အစ၊ ရိုဗာ အဆုံး ရှိသော ကင်းထောက်အဖွဲ့ဝင်များ အဆင့်ဆင့် လေ့ကျင့် ကြရပုံမှာ ချီးကျူးဖွယ်ကောင်းလှပေသည်။ ကင်းထောက် ကင်းထောက်တို့သည် ယူနီဖောင်းဝတ်စုံကို ဆင်ယင်ထားကြသော်လည်း ကင်းထောက်လုပ်ငန်းမှာ စစ် သဘောမပါ၊ နိုင်ငံရေးမစွက်၊ လူမှုဝန်ထမ်းသက်သက်မျှသာ ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားပီသသောဆောင်ရွက်မှု၊ ယောက်ျား ပီသ သော ပျော်ရွှင်မှုတို့ကို ကင်းထောက်တို့ ပြုလုပ်လေ့လာကြ သည်။ ကင်းထောက်လုပ်ငန်း၏…
admin August 2, 2017 Knowledge, ဖတ်စရာ, လေ့လာစရာ No Comments